Xukuumadda oo u Jawaabtay Xisbiyada Mucaaradka ah
Hargeysa (Dawan)- Wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland ayaa jawaab ka bixisay hadal ka soo yeedhay xisbiyada mucaaradka ah ee WADDANI iyo UCID oo siyaasadeeyey eedaha loo soo jeediyey Telefishannada SAAB TV iyo STAR TV, oo ku eedaysan inay faafiyeen war xadgudub ku ah qaranimada Somaliland.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed ay baahisay wakaallada wararka Somaliland ee SOLNA, oo uu ku saxeexnaa La-taliyaha Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Axmed Yuusuf Cilmi (Suudi).
Warsaxaafadeedkaasi oo dhamaystiranina waxa uu u dhignaa sidan:- “Ma jirto wax cabudhin ah oo wasaaradda warfaafintu ku hagaasinayso saxaafadda madaxa-bannaan ee Somaliland oo aanu u aragno tiir jiritaankiisu muhiim u yahay dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Somaliland. Hase ahaatee waxa looga fadhiyaa warbaahinta in ay dabbaqdo xeerarka iyo shuruucda dalka, isla markaana ay ka dhawrsato wixii dhaawacaya qaranimada jamhuuriyadda Somaliland.
Sida uu dhigayo xeerka saxaafadda Somaliland, xeer NO. 27/2004, waxa warbaahinta xaaraan ka ah in ay baahiso warar ku lug leh arrimaha ciidammada iyo sidoo kale kuwa been abuurka ah, sidaas awgeed, waxa wasaaraddu soo saartay 30/9/2018 qoraal warbaahinta looga digay baahinta wararka lafjabka ku ah qaranimada jamhuuriyadda Somaliland, iyad oo aanu ku ammaanayno in saxaafadda inteeda badani ay xushmeeyeen qaraarkii wasaaradda.
Haddaba, waxa la yaableh xisbiyada mucaaradka ah ee WADDANI iyo UCID, oo siyaasadeynaya eedaha lagu soo oogay labada Telefishan ee Saab Tv iyo Star TV, waxaana xisbiyada mucaaridka ah looga baahan yahay inay xurmeeyaan wadajirka iyo dowladnimada Somaliland oo aanu hiilkoodu noqon mid u muuqanaya inay taageerayaan Somaliland diidka mangansaday cadowga Somaliland.”